Ukucoca iiteki zeAdidas Dragon Ball Z | Iindaba zeGajethi
Umhla okhethelwe umboniso osemthethweni awaziwa ncam, kuba kwathiwa bazakufika ekwindla kodwa bekhonkrithi encinci okanye akukho nto. Ingqokelela entsha yeziteki ukusuka I-Adidas inomdla kwi-Dragon Ball Z, ivuza iiyure ezimbalwa ezidlulileyo kumnatha.
Lo Uthotho lwe-anime oludumileyo olusekwe kwimanga ka-Akira Toriyama, iza emva kothotho lwantlandlolo lweDrag Ball, kwaye ngokuqinisekileyo ithandwa kakhulu kwihlabathi liphela. Kule meko singathi aba baqeqeshi beAdidas banolo chukumiso lwabalinganiswa kolu ngcelele, kodwa abayisebenzisi gwenxa kwaye ke baya kubhenela ngaphezulu kwabalandeli boluhlu nakwabo bangabalandeli le saga.
Ukuqala kokuvuza okubonwe kwinethiwekhi kubonisa ifayile ye- I-Adidas 'Yung-1', ukulungiswa okukhuthazwe ngumntu okhohlakeleyo uFreeza, obonakaliswe kumbala wesimboli somlingisi ukusuka kwinqaku:
I-Dragon Ball Z x Adidas Yung 1 "Frieza" ivuza nje. Zokuqala kwezihlangu ezisibhozo ezivela kule ntsebenzo kulindeleke ukuba ikhuphe ukuwa. Ezinye iimodeli ezinamahemuhemu zezi: Ukonyusa kwe-Ultra "uYajirobe" NMD_CS1 "MnuPopo" NMD_Racer "Mnu.Satan" I-futurecraft "iTenshinhan"? #Seraphpy #adidas #yung #freeza #frieza #dragonball #dragonballz #dbz
Iposi elibiwe Yintoni ehla ngokulandelayo? (@whatdropsnext) ivuliwe Jan 7, 2018 kwi-8: 34am PST
Olunye ukuvuza esinokulufumana kwinethiwekhi yoluntu i-Instagram ngezi zihlangu zemidlalo zeAdidas zivela esandleni Iseli eQokelelweyo. Kule meko, uyilo luphefumlelwe ngumlinganiswa weSeli okanye i-Celula, njengoko kusaziwa kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi:
I-Dragon Ball Z x I-Adidas Prophere "Iseli" ivuza nje. Sisibini sezihlangu ezisibhozo ezivela kule ndibano kulindeleke ukuba ikhuphe ukuwa. Ezinye iimodeli ezinamahemuhemu zezi: Ukonyusa kwe-Ultra "uYajirobe" NMD_CS1 "MnuPopo" NMD_Racer "Mnu.Satan" I-futurecraft "iTenshinhan"? @Seraphpy #adidas #prophere #cell #dragonball #dragonballz #dbz
Iposi elibiwe Yintoni ehla ngokulandelayo? (@whatdropsnext) ivuliwe Jan 8, 2018 kwi-7: 27am PST
Ngokunokwenzeka iimodeli ezichaziweyo ziya kukhatshwa ziimodeli ezininzi ezinxulumene nabalinganiswa belo thotho, kodwa oku kuya kufuneka silinde ithutyana. Kungenzeka ukuba oku kuvuza akuveli ndedwa kwaye ngayo sinokubona eminye imidlalo kwintsalela yonyaka kude kufike ikwindla, eyakuba ngumzuzu wokuphehlelelwa ngokusesikweni kwezi Adidas. Uyabathanda?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Ikhaya » Ukucoca ezinye iiteki zeAdidas ezivela kwiDrag Ball Z
I-Qualcomm iveza iprosesa entsha yeefowuni ezingenazingcingo ezinciphisa ukusetyenziswa ngaphezulu kwesiqingatha